Eat In Myanmar – Mr. Discount
Please browse up-to-date Discounts, Promotions and Coupons running at Eat In Myanmar.
eat in Myanmar သည် မြန်မာပြည်တွင် စားသောက်ဆိုင်များကို စားသုံးသူများမှ Online Booking အခမဲ့ပြုလုပ်နိုင်သော ပထမဆုံးဝန်ဆောင်မှုပေးသည့် Website ဖြစ်ပါသည်။ စားသုံးသူများအနေဖြင့် eat in Myanmar Webiste မှ ဘွန်ကင် ခလုတ်တစ်ချက်နှိပ်ရုံဖြင့် စားသောက်ဆုိုင်များတွင် အချိန်ကုန်လူပင်ပန်း တန်းစီစရာ၊ ဖုန်းခေါ်ဆုိုစရာ မလုိုပဲ သွားရောက်စားသုံးနုိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ eat in Myanmar ရဲ့အကောင်းဆုံး ၀န်ဆောင်မှုတစ်ခုကတော့ ရန်ကုန်မြို့ရဲ့ အကောင်းဆုံးစားသောက်ဆိုင်အချို့မှာ Total Bill ရဲ့ 20% အထိ Discount ရရှိမယ့် အစီအစဉ်များပဲဖြစ်ပါတယ်
အသေးစိတ်ကို သိရှိလုိုပါက www.eatinmyanmar.com သို့ဝင်ရောက်ကြည့်ရှု၍သော်လည်းကောင်း၊ ဖုန်း ၀၉- ၇၈၈ ၁၂၉ ၅၅၇ သို့ခေါ်ဆုို၍သော်လည်းကောင်း စုံစမ်းမေးမြန်းနုိုင်ပါသည်
eat in Myanmar (eiM) is the first online restaurant booking service in Myanmar. We provide 100% free service to all the diners. Through us, withafew clicks, diners can make bookings without waiting or calling restaurants. The best part is we offer diner discounts dinning up to 20% of total bill at some of Yangon best restaurants.
For more information, please visit www.eatinmyanmar.com or contact 09-788 129 557.
Eat in Myanmar ရဲ့  booking တင် ပြီး သွားစားရင် 10% discount ရမယ့် အစီအစဉ်